Su'aalo la'iska weeydiinayo Boeing kadib shilkii Itoobiya - Waadinews | Somali News and Entertainments
Waa kii labaad muddo 6 bilood gudahood oo ay diyaaradan galayso, kii kan ka horeeyay waxa uu ka dhacay dalka Indonosia bishii Oktoobar ee sannadkii hore, wax yar uu ka dib markii ay cagaha dhulka ka qaadday. Balse xeeldheerayaasha ayaa ka digaya in lagu degdego jawaabo aanan caddeymo rasmi ah loo haynin.
Duuliyihii kaxaynayay diyaaradda oo magaciisu yahay Yared Getachew ayaa la sheegay in sooyaalkiisa duulimaadka uu aad u fiicanyahay, islamarkaasna haysto 8 kun oo saacadood oo waayo aragnimo duulimaad ah. 737 Max-8 waa diyaarad ku cusub hawada, waxayna suuqa soo gashay sannadkii 2017-kii. Tii shalay dhacday waxa ay ka mid ahayd 6 diyaaradood oo caynka ah oo shirkadda Ethiopian Airlines ay ka iibsatay shirkadda Boeing,
balse dalabka waxa uu ahaa 30 xabbo, iyada oo kuwa kalena aanan weli lasoo gaarsiin shirkadda. Shirkadda Boeing ayaa sheegtay in ay kaalmo farsamo u fidin doonto Itoobiya. Kadib shilkii dhacay bishii Oktoobar, baarayaasha waxa ay sheegeen in duuliyaha uu ku rafaaday sidii uu u xakamayn lahaa habka kaligiis is haga ee diyaaradda ay ku shaqayso, kaas oo shukaanta diyaaradda mararka qaar kala wareegi kara duuliyaha.
Kadib shilkii sannadkii hore, shirkadda Boeing ayaa wargalin u dirtay dhammaan shirkadaha diyaaradaha, waxa ay u sheegtay in ay dhibaato ka jirto barnaamijka casriga ah ee lagu shubey diyaaradda ee iskiis u shaqeeya. Andrew Blacke oo horey u ahaan jirey duuliye ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in habka cusub laga yaabo in aanan si wanaagsan loogu sharixin shaqaalaha qaabka uu u shaqeeyo, taasna ay horseedday shilka.
Balse waxa uu sheegay in ay wax iska caadi tahay in shilal badan ay dhacaan marka nooc cusub oo diyaarad ah ay suuqa soo gasho. Baaritaanka lagu hayo shilkii shalay dhacay wuxuu marayaa xilli hore, mana cadda sababta ka dambeysay, iyada oo baarayaasha ay sheegayaan in gef ka dhacay bini’aadamka iyo ciladdo kale aanan meesha laga saari karin.
Hadda waxaa dedaal loogu jiraa sidii loo heli lahaa sanaadiiqda madoow ee ku rakiban diyaaradda, kuwaas oo duuba wixii dhacay daqiiqadihi ugu dambeeyay ka hor inta aysan dhicin. Shirkadda ayaase sii wadaysa isticmaalka diyaaradda 737 maadaamaa aanan weli la ogaanin sababta keentay shilka. Balse waxaa jira shirkado kale oo joojiyay isticmaalka noocan diyaaradda ah. BBC Somali
Related Topics:737 Max-8BoeingYared Getachew